Amazwi KaMashi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Mashi, inyanga yokuqala yentwasahlobo yezulu. Le yinyanga lapho, yize isithwathwa nesiphepho sisenzeka kwezinye izingxenye zezwe, ukubukeka komhlaba kuguquka kancane kube luhlaza okotshani. Izihlahla zigcwala amaqabunga njengoba iqhwa lincibilika, nezimbali ziqala ukuqhakaza.
Lezi zivunguvungu ebezikade zilindelwe zizohlinzeka ngamanzi anele ukunikeza abalimi isiqalo esihle sesizini. Kodwa-ke, futhi njengoba izisho zikaMashi zisixwayisa, akumele sizethembe: isimo sezulu esibi asikasuki ngokuphelele.
1 Sinjani isimo sezulu ngokuvamile ngoMashi eSpain?
2 Mashi amazwi
Sinjani isimo sezulu ngokuvamile ngoMashi eSpain?
Mashi Kuyinyanga lapho kuvame ukubanda futhi kubande kakhulu engxenyeni esenyakatho yenhlonhlo, futhi kugcinwa ngamazinga okushisa athokozisayo eningizimu, naseziqhingini zeziqhingi. Izinga lokushisa elijwayelekile lingu-11,3ºC (inkomba yesikhathi 1981-2010).
Uma sikhuluma ngemvula, kubhekwa njengenyanga ejwayelekile enomswakama, ngemvula emaphakathi eyi-47mm (inkomba yesikhathi 1981-2010). Inyakatho yenhlonhlo yiyona ethola imvula eningi, kanti eningizimu, iMallorca ne-Ibiza yizo ezivame ukubhalisa amanani aphansi kakhulu kule nyanga.
Kodwa zithini izisho?
Ilanga likaMashi, lishaye njengetshe: kunezinsuku lapho ilanga lishubisa kakhulu kuze kube sengathi siphakathi noJuni noma uJulayi. Yizikhathi ezinhle kakhulu, ezilungele ukuchitha isikhathi ungekho ekhaya.
NgoMashi, zonke izinkambu ziyaqhakazaVele, lapho ilanga lifudumeza umhlabathi, izitshalo ziqala ukukhiqiza inani elikhulu lezimbali, zenze izindawo ziphinde ziphinde ziphile.
Mashi, izihlahla ze-alimondi ziyaqhakaza nezinsizwa zisothandweni: izihlahla zezithelo ezinjengezihlahla ze-alimondi zimbozwe amacembe amhlophe futhi kukhona labo abathatha ithuba lokuzibonakalisa kulowo muntu okhethekile.
Mashi, amamashi, umoya obandayo nesiphepho: yize ilanga lihle kangangoba kungaba nosuku, ungathembi. Ngakusasa kungabanda kakhulu futhi nesichotho singawa.
NgoMashi ukuduma kwezulu, kuyisimangaliso: Kithina esijabulela iziphepho, uMashi akuyona inyanga enhle impela. Kungaba nezinsuku ezintathu kuya kwezine ezinesiphepho, bese kungenzeki lutho… kuze kube yinyanga ezayo. Futhi lokho akushiwo ukuthi bahlala isikhathi esifushane kangakanani.
Ngomuntu iqhwa lokugcina liyilo: usuku lokuzalwa komzimba nguMashi 25, usuku ofuna ukuqeda ngalo isikhathi seqhwa, yize iqiniso ukuthi akugcini kuze kube ngu-Ephreli-Meyi.
Mashi ntambama, qoqa izinkomo zakho: kubalulekile ukuvikela izilwane emakhazeni nasemakhazeni. Uma kwenzeka nje.
Inkungu kaMashi, ngo-Ephreli iqhwa: Iqhwa phakathi nenyanga yesithathu yonyaka kuvame ukuba uphawu lokuthi isimo sezulu esibi sizoba khona maduze.
Umoya kaMarzal, isiphepho esihle- Amandla omoya anamandla ayesatshwa, olwandle nasemhlabeni. Lolu hlobo lomoya luvame ukudala iziphepho ezinqamula iBay of Biscay ziye eziqhingini zaseBalearic.
Uma ubona iSan Ambrosio iqhwa, kuyabanda ishumi nesishiyagalombili: Usuku lukaSanta nguMashi 20, usuku abathi ngalo uma likhithika ... iqhwa lizohambisana namakhaza azohlala izinsuku eziyi-18.
Ezomile zikaMashi ziyizimvula ngoMeyi: kuyinduduzo. Uma lingani kule nyanga, kuzobe selingoMashi, empeleni kunesinye isisho esithi:
UMashi owomile, uMeyi onethayo: ngakho-ke, kufanele silinde nje sibone ukuthi isimo sezulu sizoba njani.
Mashi wezimvula ezinkulu, unyaka oneshwa kakhulu: izimvula zinhle kakhulu, kepha uma lina kakhulu, zonke izitshalo zingonakala. Ngakho-ke, abalimi abafuni ukuthi line kakhulu kunalokho okudingekile, ngaphandle kwalokho bazoba nenkathi embi kakhulu.
Ngo-Mashi, ngisho ne-wet wet: nge »mur» basho igundane. Vumela imvula, kepha ngaphandle kwale nduku kugcine kumanzi kakhulu.
Mashi, noma ulwandle olumanzi; amasonto amathathu kodwa hhayi amane: iviki lokugcina lenyanga, njengoba amazinga okushisa ezoqala ukuba mnandi kakhulu nezitshalo zizoqala ukukhula ukuthi kuzoba kuhle ukuzibona, kungana kakhulu njengoba ufuna.
Amanzi ngoMashi, ukhula: siyini isizathu. Noma ngabe unengadi noma insimu yezithelo, uma lina uzobona masinyane ukuthi utshani basendle bukhula bungagxili, kuze kufike ezingeni lokuthi ungaba nehlathi lamakhambi.
Izithwathwa ngoMashi zithanda izitshalo: nemithi yezithelo. Futhi kunezitshalo eziningi ezidinga ukubanda ukuze zithele izithelo; uma kungenjalo, ngeke sibe nesivuno esihle.
Izihlahla ezincane ezisembali, susa amabhulashi we-Incarnation: isithwathwa esesabekayo sekwephuzile. Uma zikhiqizwa, izimbali ziba yiqhwa futhi, kanye nazo, lonke ithemba lesithelo liyaphela. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuwavikela uma kunengozi yesithwathwa.
Ngabe zikhona ezinye izulu ozaziyo ngoFebhuwari?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Mashi amazwi